Imaanshaha Belgium - Asylum Info
Wax walbo aad rabto in aad ka ogaato codsiga qaxootinimo ee Beljimka.
Ku noolaanshaha Belgium
Fursadaha Iskaa Waw U Qabsiga
Xagee ayaan weydiin karaa/diiwaanka magangalyada?
Marka aad timaatid Belgium, fadlan aad Xafiiska Socdaalka (u dhow Gare du Nord) sida ugu dhaqsiha badan oo suuttogal ah si aad horay usu diiwaangelisid. Tani waa meesha kaliya ee Belgium ee halka aad ka codsan kartid magangalyo.
Haddii laguugu xiray xarunta xabsiga, sidoo kale waad ka codsan kartaa magangalyo halkaas. Markii laguu diido ka soo gelitaanka xaduudka, waxaad ka codsan kartaa magangalyo xaduudka, taas oo kadib malaha laguu dirayo xarunta xabsiga.
Saacada furnaanshaha: maalmaha isbuuca ka bilow 8:45-10:00
MUHIIM AH: Waa in aad ku aadaa qof ahaan Xafiiska Socdaalka sideed maalmood oo shaqo gudahooda oo ka bilaabaneyso imaanshaha Belgium! Haddii aad leedahay carruur waa in aad la imaataa maalinta Xafiiska Socdaalka.
Waa maxay diiwaangelinta hore?
Markii kowdii aad u soo bandhigtid shaqsigaaga xafiiska Socdaalka waxaad heleysaa kulan guud (ogeysiin). Kulankaan wuxuu wataa lambar tixraac iyo qadka websaydka. Waa in aad eegtaa maalin walba kadib 16:00 haddii lambarkaaga ka muuqdo websaydka. Maalinta kadib lambarka ka muuqdo weybsaydkaan, waa in aad qof ahaan u aadaa Xafiiska Socdaalka oo diiwaangelin ah.
Lambarkaaga sidoo kale waxaa lagu daabacay albaabka Xafiiska Socdaalka iyo soo gelitaanka xarunta hoyga halkaas oo aad seexan kartid ilaa aad iska diiwaangelisid. Ha i loobin in aad la imaatid waraaqahaaga balanta.
Xagee ayaan joogi karaan in ta lagu jiro kulanka guud?
Waxaan leeyahay kulanka guud oo aan ku oqrneyn “NO” (MAYA) warqada: Diiwaangelinta hore kadib waxaad leedahay suurtogalnimada ah in aad joogtid xarunta kumeelgaarka ah ilaa maalinta diiwaangelinta. Xafiiska Socdaalka ayaa ku siinayo adiga ciwaanka iyo tikidka tareen ama bas oo aad ku tagtid xarunta soo dhaweynta.
Waxaan leeyahay kulanka guud oo “NO” (MAYA) ugu qoran warqad: Haddii kulanka guud sheego erayga ‘MAYA’ xaq uma lihid hoyga hore. Tani waxay noqon kartaa xaalada haddii aysan aheyn markii ugu horeysay ee aad ka codsatay magangalyo Belgium.
Haddii aysan aheyn markii ugu horeysay ee aad weydiisatay magangalyo, waxaad ka heli kartaa warbixin badan oo soo dhaweynta halkaan.
Halkee ayaan ka heli karaa warbixinta?
Barta bilowga, Vluchtelingenwerk Vlaanderen xeelada, waxay bixisaa maraq iyo warbixinta (talada sharciga iwm.). Waxay u dhowdahay Xafiiska Socdaal.
Barta bilowga, Antwerpsesteenweg 34, 1000 Brussels, 12:00-13:00, maalin walba.
Xagee ayaan ka heli karaa hoy?
Waxaa jiro hiy degdeg ee Samusocial
Waa in aad soo wacdaa si aad u ogaatid haddii boos laga helayo. Garaac lambarka bilaashka ah: 0800 99 340
Xagee ayaan ka heli karaa dhar?
Waxaad ka heli kartaa dhar kaniisada St Rochus: Antwerpsesteenweg 60, Brussels inta u dhaxeyso 11:00 iyo 14:00.
Hay’ada iskaa wax u qabsiga Platforme Citoyenne waxay bixisaa dhar Arbacooyinka iyo Sabtiyada. Waxay sidoo kale bixiyaan tallada sharciga iyo warbixinta guud. Waxaa sidoo kale jiro dugsiga ee carruurta (kaliya Sabtiyada) iyo qaar kamid ah howlaha kale.
Rue Léon Théodore 85, 1090 Jette
Furantahay maalin walba ka bilow 11:00 – 18:00
Ka raadi Facebook wixii aqbaaro ah: Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles
Xagee ayaan ka heli karaa caawinta caafimaadka?
Haddiiba aan laguu diiwaangelin sida magangalya doon, waxaad leedahay helitaan xadidan oo daryeelka caafimaadka ah. Waxaad isticmaali kartaa howlaha xigga illaa diiwaangelinta. Miyaa lagaa diiwaangeliyay sida magangalya doon, fadlan la tasho qeybta Daryeelka caafimaadka iyo caawinta caafimaadka.
Waxaad ka heli kartaa dhaqtar Brussels ee Medibus, adeeg ay maamulaan Medecins du Monde
Xarunta Saldhiga – Rue des Sols :
Isniinta 18 :30 – 20:45
At Ribaucourt – Meesha Sainctelette – Métro Yser:
Talaado 15:00 – 18:00.
Qamiis 15:00 – 18:00.
At Gare du Midi – Esplanade de l’Europe :
Talaado 18:30 – 20:45.
On Avenue Louise:
Talaado 21:00 – 22:45At Gare du Nord – Place Simon Bolivar :
Qamiis 18:30 – 20:45.
Waxaad ka heli kartaa dhaqtarka ilkaha Medecins Du Monde on Rue Botanique 75, 1210 Brussels (Centre de Soins de Bruxelles) ee Qamiisaha iyo Jimcooyinka (isbedshaa laba isbuuc oo walba) 14:00 – 17:00. Haddii aad qabtid gurmadka ilkaha oo halis ah waxaa laguugu daaweyn karaa Hospital Saint Pierre, kaas oo ah isbitaal kaliya ee leh adeega ilkaha degdega.
Sidoo kale ka fiiri www.clinicfinder.org oo gargaarka caafimaadka oo bilaash ah.
Xaalado walba oo degdega ah waxaad soo wici kartaa 112 oo ambalaansa ah. Waxay ku geynayaan isbitaal.
Xagee ayaan ka heli karaa caawinta cilmi nafsiga?
Solentra waxay siisaa baaritaanka iyo taageerada daaweynta qaxootiyada iyo carruurta nuhaajirka iyo qoysaskooda.
La xiriir 02 477 57 15 (ka bilow 9am ilaa 12am).
Waxaan la kulmay ula dhaqan xumo. Xagee ayaan caawin ka heli karaa?
Haddii aad ku aragtid nafsadaada mid ka mid ah xaaladaha xigga:
Xaalada aad ku jirtid way ka duwantahay waxa laguu balan qaaday ka hor inta aadan halkaan imaanin.
Waxaa laguu qasbay in aad sameysid waxyaabo aadan rabin in aad sameysid.
Mushaarkaaga wuu ka hooseeyaa mushaarka laguu balanqaaday, si adag ayaa laguu siiyaa ama laguma siiyo gabi ahaanba shaqada aad qabatid.
Waxaa laguugu qasbay in aad shaqeysid si markaas aad safarkaaga u bixisid ee (ama codsiga) dadka ku keenay halkaan.
Adiga iyo/ama qoyskaaga la din hanjabay iyo/ama aad tihiin dhibana xadgudub.
Waraaqahaaga lagaa qaaday ama lagaa celinayo.
Guri laguugu xiro waqtiga inta badan. Gabi ahaanba aad ku nooshahay gooniyeyn dunida banaanka ah.
Aad timid Belgium safar dheer kadib oo kugu kacay lacag badan, ama sidoo kale aad aheyd dhibane xadgudub ama noloshaada halis lageliyay.
Waxaad la soo xiriiri kartaa Pag-asa:
Cellebroersstraat 16 (ku jirto qariirad)
Tel: + 32 2 511 64 64
Waxaa iga lumay xubno qoys. Yaase iga caawin kara?
Haddii aad xiriir ka weysay xubin qoyska ah sida ay sababtay qilaafyada hubeysan, masiibada dabiiciga ama warshadaha, dhibaatooyinka bani aadamnimada ama sababtoo ah socdaal aad u tagi kartid Red Cross si aad isku daydid in aad heshid dadka aad jeceshahay. Dhaqdhaqaaqa Red Cross/Red Crescent, oo dunida oo dhan ah, waxay sameynayaan karaankooda ay ku helaan dadkaas ka maqan iyo soo celiyaan xiriirka qoyska.
Xaaladaan, Belgian Red Cross ayaa ku caawin karta:
raadi qaraabadaada kaa maqan,
fariimo isdhaafsada qoyska ee xaalada halka xiriirka caadiga ah uu micnahiisa yahay mid si xoogan u saameeyay ama u carqaladeeyay;
la midoobida qaraabada ee ay heleen Red Cross oo ka faa’idi karo fiisada usu keenista qoyska.
Croix-Rouge de Belgique – Adeegyada Raadinta / Soo celinta Xiriirka Qoyska, Rue de Stalle 96 – 1180 Bruxelles – Tel. 02 371 31 58 (la la xiriiri karo ka bilow 9am ilaa 12.30pm)